Dowladda Jabuuti oo Jawaab Adag ka bixisay Hanjabaad uga timi kooxda Al-Shabaab | Somaliland Post
Home News Dowladda Jabuuti oo Jawaab Adag ka bixisay Hanjabaad uga timi kooxda Al-Shabaab
Dowladda Jabuuti oo Jawaab Adag ka bixisay Hanjabaad uga timi kooxda Al-Shabaab
Djibouti (SLpost)- Dowladda Jabuuti ayaa jawaab adag ka bixisay hanjabaad ka soo yeedhay Kooxda ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ee Al-Shabaab oo dhawaan ku gooddiday weerarro ay fuliyaan dalkaas oo diyaar-garow doorashooyin ku jira.
Hoggaamiyaha Kooxda Al-Shabaab oo dhawaan soo saaray muuqaal 20 daqiiqo ah, kaas oo uu kaga hadlay doorashooyinka loo muddeeyey inay 9-ka bishan April ka dhacaan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
War-saxaaafadeed ka soo baxay wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Jabuuti, ayaa lagu sheegay inaanay hanjabaadaasi ka horjoogsan doonin hawl-gallada ay Ciidamadooda oo qayb ka ah Xoogagga Midowga Afrika ee AMISOM ee nabad-ilaalinta u jooga Soomaaliya.
Waxa ay dowladda Jabuuti sheegtay inay walba door firfircoon ka ciyaarayso dedaallada beesha caalamka ugu jirto in xasiloonida lagu soo dabbaalo Soomaaliya.
“Jabuuti waxay tahay, waligeedna sii ahaanaysaa saaxiib laysku halleyn karo oo u darban Soomaaliya iyo dedaallada beesha Caalamka ee xasilinta Soomaaliya,” Sidaas ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka.
Waxa kale oo war-saxaafadeedka lagu sheegay, “Al-Shabab waxay si joogta ah u soo saaraysay hanjabaado toos ah oo ka dhan ah wadamada gobolka ee Soomaaliya siinaya taagera ilaa iyo inta uu dalku awood u yeelanayo inuu si buuxda u kafaalo-qaado ammaankiisa”.
Hoggaamiyaha Al-Shabaab ayaa muuqaal 20 daqiiqo ah oo uu dhawaan iska soo duubay, kaga hadlay doorashooyinka 9 bishaan lagu wado in ay ka dhacaan dalka Jabuuti, waxaanu ku hanjabay inay qaraxyo ka geysanayaan dalkaas.